"LIL' Easy" - I-Airbnb
Indawo yami iseduze ne-Tybee Island Lighthouse, e-Ft. Screven, Ft. I-Pulaski, amapaki, izindawo zokudlela, nezindawo zokudlela. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yendawo, indawo ezungezile, abantu, indawo engaphandle, indawo yomfula i-Savannah River, kanye nolwandle olwandle lwe-Atlantic. Abangane abanoboya ngo-$75.00 ngokuhlala.
Igceke elingemuva elibiyelwe ngocingo eliyimfihlo elinechibi elincane elenziwe umuntu kanye nezihlalo zangaphandle netafula langaphandle elinezihlalo zamabhentshi kanye negrill ye-BBQ yegesi. Sinikeza ikhishi eligcwele eligcwele amabhodwe, amapani, izitsha, izitsha, izibuko nezitsha, ihhavini le-toaster, isitofu, i-microwave, ibhodwe lekhofi, nesiqandisi. I-blender, iron, ne-ayina ibhodi iyatholakala uma uyicela.
4.91 · 243 okushiwo abanye
Lesi sikhala siseNyakatho yeTybee (ekugcineni okuthule) futhi senza kube lula kakhulu ukuphuma esiqhingini ukuvakashela i-Savannah. Kukhona isitolo esithengisa izinto ezilula, iposi kanye nesikhungo sezivakashi ngaphakathi kwebanga lokuhamba kanye nezindawo zokudlela, i-lighthouse, i-Ft. I-Screven, ukuqashwa kwamabhayisikili nezitolo zasendaweni ezijabulisayo.